कस्ता मानिसले माछा खानु हुँदैन त ? जान्नुहोस - visualnepal
३ . मोटोपना भएकाहरूका लागि
माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूका लागि माछा हानिकारक हुन्छ। साथै अन्यले बुझ्नु आवश्यक छ कि माछाको मासु दिनदिनै र धेरै खाने कुरा होइन। यसको अधिक सेवनले जस्तोसुकै निरोगी व्यक्तिलाई पनि अस्पतालको शैय्यामा जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्दछ। साधारण प्रौढ व्यक्तिले हप्तामा १ चोटि भन्दा बढि माछा सेवन गर्नु अनुचित हुने देखिएको छ। तर यसको मात्रा शरिरको तौल र उचाइ अनुसार पनि फरक पर्दछ। त्यसलगायत ५ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई २ हप्तामा १ पटक मात्रै माछा खुवाउनु उचित हुन्छ।
माछाको मासुमा पचाउन मिल्ने फाइबर र कार्बोहाइड्रेटको अनुपस्थिती हुने हुनाले पेटको समस्या हुनेहरूको लागि माछा हानिकारक हुन जान्छ। तैपनि हेलचेक्र्याईँ गर्दै खाएमा, पेटको क्यान्सर समेत हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
पटक हेरिएको 343